Accueil > Gazetin'ny nosy > Faritra Atsinanana: Hitokona manomboka anio ny mpampianatra
Faritra Atsinanana: Hitokona manomboka anio ny mpampianatra
Hisy fikorontanana indray ny tontolon’ny fampianarana ao amin’ny Faritra Atsinanana, manomboka amin’ity anio ity. Araka ny fanambarana nataon’ireo mpampianatra miasa amin’ny sekolim-panjakana izay mivondrona ao anatin’ny SEMPAMA-Nosy ao amin’ny Faritra Atsinanana, dia hitokona tsy hampianatra izy ireo manomboka androany 15 mey, ary mandritra ny fotoana tsy voafetra. Fanambarana izay efa nampahafantarina ireo lehiben’ny CISCO rehetra manerana ny Faritra Atsinanana sy ny DREN na ny Talem-paritra ny fanabeazam-pirenena any an-toerana. Anton’izao fitokonana izao raha ny voalazan’ny sendika dia noho ny tsy famalian’ny fitondram-panjakana ny fitakiana nataon’izy ireo, efa ho volana maro izay, sy ny fampanantenana poakaty nataon’ny mpitondra. Fa eo koa ny fanoherana ny kolikoly avo lenta izay manjaka eo anivon’ny ministeran’ny Fanabea-
zam-pirenena. Noraisin’ny sendika ohatra ny nanjakan’ny kolikoly tamin’ny fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana tamin’ny andiany fahadimy farany teo. Manamarika moa ny SEMPAMA-Nosy fa fanapahan-kevitra efa noraisina nandritra ny fivorian’ny birao nasionaly, natao tamin’ny 22 sy ny 23 aprily lasa teo, izao firosoana amin’ny fitokonana izao. Manoloana izany, nampilaza ireo ray aman-drenin’ny mpianatra rehetra ao amin’ny Faritra Atsinanana mba tsy handefa ny zanany any an-tsekoly ny sendika.
Fiantohana MAMA: Vavolombelon’ny fahaiza-mitantan’ny Malagasy
Ny Fikambanam-piantohana MAMA dia seha-piasana iray nihariharian’ny fahaiza-mitantana tato anatin’ny 10 taona eo izao, ary tena azo tsapain-tanana ny fiarenany sy ny firoboroboany tao anatin’izay fotoana izay.
Ny fiovan’ny mpitantana teo anivon’ity Fikambanam-piantohana MAMA ity, izay teo ambany fiandraiketan’ny tale jeneraly Ranirimanga Sabine sy ny mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitondrana (Conseil d’administration) dia nirazotra tamin’ny fanovana fomba fiasa sy fanovana rafitra ary fanavaozana tarigetra. Nivaingana io voka-panovana io ary na ny mpikambana (ireo manana fiarakodia miditra ho eo ambany fiantohan’ny Mama) aza dia mahatsapa an’izany. Ny onitra izay mamatotra andraikitra ny Fiantohana MAMA dia ity fikambanam-piantohana ity indray aza no miantso ny olona tokony andoavana ny onitra fa tsy mba toy ny tany aloha tany hoe « tsy voaloa mihitsy ny onitra raha vao ny MAMA no tompon’andraikitra aminy ». Raha sendra loza miteraka faharatrana, na tsy mbola voaporofo aza fa ny fiarakodia eo ambany fiantohan’ny MAMA no diso, dia efa mandray andraikitra mitondra ny anjara-birikiny ho famonjena ny maratra ny
Ireo tranon’ny masoivohon’ny Fikambanam-piantohana MAMA any amin’ny faritra maro manerana ny Nosy koa dia manaporofo ny firoboroboan’ny MAMA satria misy fivoarany goavana, ho an’ireo nilàna fikojakojana, fa maro no nananganana trano vaovao mihitsy.
Eo amin’ny fomba fiasa manokana dia nivoatra nanaraka ny toetrandro ny MAMA satria efa misy ny fampiasana ny milina solosaina sy ny tambajotra iombonana eo amin’ireo masoivoho sy ny foibe ao Ambalavao Isotry.
Mivaingana toa izany koa ny fivoarana teo amin’ny fanefana ny trosan’olona nitambaby tamin’ny MAMA, ary ny vola fiandry, araka ny lalàna momba ny fiantohana dia voahajan’ny MAMA ny fenitra takian’izany lalàna izany. Ny mpiasan’ny MAMA koa dia isan’ny mpiasa malagasy voatsinjo eo amin’ny lafiny sosialy, manomboka amin’ny karama, izay tsy mba tratra aoriana intsony ny fanefana azy, ary tsy nitsahatra nanondrotra izany karaman’ny mpiasa ao aminy izany ny MAMA isa-taona tato anatin’ny 10 taona farany izao, na dia tsy hoe mahafa-po aza noho ny fidangan’ny vidim-piainana, dia mahavita miantoka ny farafahakelin’ny filàna fototra kosa.
Raha ny fahasahiranana lalovan’ny firenena tato anatin’ny 10 taona farany koa no ampitahaina amin’ny tontolom-pitantanana ny MAMA dia toy ny fahagagana ny mahita ny fivoarana sy firoboroboan’ny MAMA.
50 taona ankehitriny ny MAMA ary ity taona 2018 ity dia natokana hanamarihana sy hankalazana an’izany. Nanomboka tamin’ny fanompoam-pivavahana natao teo amin’ny Foiben’ny MAMA etsy Ambalavao ny alakamisy faha-10 May lasa teo izany fankalazana ny Jobily faha-50 taonan’ny MAMA izany, ary nitohy tamin’ny alalan’ny lanonam-pialamboly nombam-piaraha-misakafo narahin-dihy teny amin’ny Akany Soafonenako eny Ivato.
Mbola hitohy amin’ny alalan’ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena sy ara-pialamboly hafa mbamin’ny ara-kolotsaina izany, ka any amin’ny volana oktobra any mihitsy vao hifarana ny hetsi-pankalazana.
Manaporofo ny fahaizan’ny Malagasy mitantan-draharaha rehefa omena fitokisana sy fahalalahana tsara ny ao amin’ny MAMA, ka isarihana ny fisainan’ny maro hoe “nahoana no tsy ho azo ampiharina sy tsy hananana fanantenana ny fampivorana sy fampandrosoana ny firenena raha homena hotantanin’ny Malagasy tiatanindrazana tsy miankin-doha sy mpandala ny tena fiandrianam-pirenena ny fiainam-pirenena ?”